ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရာဇ၀င်မှာ စာတင်လို့ ကျူးခဲ့ကြ”
Great post, this is what suppose to be.
လာဖတ်သွားပါတယ်၊ ကိုပေါ အမြင်ကို သဘောတူုပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေက ခေါင်းဆောင်ကောင်းရင် နောက်လိုက်ကောင်းတက်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့၈၈ ကာလတုန်းက ရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုဂ်မှာ သိန်းနဲ့ ချီရှိတဲ့လူတွေကို စည်းကမ်းရှိအောင် ထိန်းနိုင်သလို၊ လူတွေကလည်း လိုက်နာနိုင်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းသာ ရှေ့မှာရှိပါ၊ ဘာစနစ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ထိုက်တန်ပါတယ်။
ကိုပေါ ရေ အရင် post ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိ ကတည်း အတွေးကောင်းအရေးကောင်းကို ချီးကျူးပါတယ် အဲဒီတုန်းကလဲ မြန်မာတွေရိုင်းသေးတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မတန်သေးဘူး လို့ ပြောခဲ့သူများရှိခဲ့ကြသလား အခုလဲစည်းကမ်းပြည့်ဝ သော ဒီမိုကရေစီကြီးကိုတွင်တွင်သုံးလာပြီး သူတို့နဲ့မှဘဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးဖြစ်လာတော့မယောင် ယောင်နဲ့ ပြည်သူတွေအမှန်တကယ် ဖြစ်ခြင်တာ change ဘဲ change ဆိုတာ အခုလက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေကို လုံးဝမမြင်ခင်တော့တဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုးပေါ့
Cheers ! Ko Paw.
Again, may I get permission to re-publish in my blog ? (http://opera.lawshay.com not http://www.lawshay.com)
>>Photo_Vigor, ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ မျိုးဝင်းဇော်၊ Law Shay… Thank you all.
Law Shay, please go ahead. Thanks.
ကိုမျိုးဝင်းဇော်ပြောသလိုပဲ ကိုပေါရေ..။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ ဒါပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးများများရေးပါခင်ဗျာ။
very nice post, Ko Paw!
ko Paw,alot of people exploring ways of change bt til now nothing can be changed. what's wrong is it? no one is feasible to implement or not readiness among people? pls try to launchapost regards to that matter based on ur own view if possible. Pls dn't ask the Q "what r we doing now?" we r waiting for something that may be leader,leadership, , tatic, strategies, certain timebeing,etc...
လာဖတ်သွားးပါတယ်။ ထပ်ပြီး ဘာမှ ပြောစရာမလိုအောင်ကို ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အားလုံးမှာ ဒီလိုသုံးသပ်မှုလေးတွေ များများ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုပေါရေ ဒီပိုစ့်လေးလဲ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ လိုပဲ သဘောကျမိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလေးတွေ အေးအေးဆေးဆေးတွေးပြီး ဆက်ရေးပါဦး။
“ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို အရွယ်ငယ်တဲ့စာသင်သားတွေ စေလွှတ်တယ် ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံလို ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်တောက်တဲ့ နိုင်ငံက စာချဆရာတော်ကြီးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်သီတင်းသုံးဖို့ပင့် တယ် ။ ဒီနည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ဂိုဏ်း နဲ့သီဟိုဠ်ဂိုဏ်း ဆိုပြီး ဂိုဏ်းနှစ်ဂိုဏ်း ဖြစ်လာပါတယ် ။
တိုင်းရင်းသား ဂိုဏ်းဝင်တွေဟာ သီဟိုဠ်ဂိုဏ်းဝင် သံဃာတွေလောက် ၀ိနည်းကို မလေးစားဘူးလို့ထင်ရပါတယ် ။ သီဟိုဠ်ဂိုဏ်းဝင်တွေကို ၀ိနည်းဓိုရ်လို့ ခေါ်ကြတယ် ။ တိုင်းရင်းဂိုဏ်းဝင် သံဃာတွေကို တောကျောင်းဘုန်းကြီးလို့ ခေါ်တယ် ။ အရည်းလို့ လည်း ခေါ်တယ်လို့ထင်ရပါတယ် ။
အရည်းတွေဟာ နောင်အခါ စွပ်စွဲသလို ဖောက်ပြန်တဲ့အကျင့် ရှိသူတွေ ဟုတ်မယ်မထင်ပါ ။ ပန်းဦးလွှတ်တဲ့အကျင့် တွေရှိတယ်လို့စွပ်စွဲချက်တွေအတွက် အထောက်အထားမတွေ့ ပါ ။ အရည်းတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖယ်ရှား နှင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ချွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံဖို့ ခက်ပါတယ် ။ အမှန်က ၁၅ရာစုနှစ်ကုန်အထိ တောကျောင်းဂိုဏ်း ရှိနေပါတယ် ။ ”
ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ရေးတဲ့ဇူလိုင် ၂၀၀၄ မုံရွေးစာအုတ်တိုက် ထုတ် “မြန်မာသမိုင်းပုံ” စာမျက်နှာ ၁၆၄ မှ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခြား တဖက်မှ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
"ရှေးမြန်မာတွေဟာ ပြင်ပက ၀င်လာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို အသစ်အဆန်းအနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား လက်ခံကြပုံရတယ်။ ဇာတ်၊ ဂီတ၊ အက စတဲ့ သုခုမ အနုပညာတွေမှာ ရှေးခေတ်မြန်မာပြည်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ရသမျှ နိုင်ငံတွေက ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရောယှက်နေတာကို သတိထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို လက်ခံနိုင်ကြတာဟာလည်း မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်မှာ (သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာ နေရတာဖြစ်သော်ငြား) ငါတို့လူမျိုးဟာ “ကိုယ့်ထီး၊ ကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ့်ကြငှန်း” နဲ့ နေနိုင်တဲ့ လူမျိုးတွေရယ်လို့ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးစိတ်နေစိတ်ထားရှိလို့ ပွင့်လင်းစွာ လက်ခံနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
တကယ်လို့သာ မြန်မာပြည်ဟာ လွတ်လပ်ပြီးချိန်က စလို့ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးတရပ်အနေနဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေ ကာလရှည်ကြာ ဆက်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဟာ ပုဂံခေတ်က မြန်မာတွေလိုပဲ ကမ္ဘာတလွှားက ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို သဘောထားကြီးကြီး၊ ပွင့်လင်းတဲ့အမြင်နဲ့ လက်ခံနိုင်ကြမှာ အသေအချာပါ။ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို နားမလည်ကြဘူးလို့ ဆိုလာရင် ကျနော်တို့ဟာ နားမျက်စိကို နှစ်ရှည်လများ အပိတ်ခံထားရတဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားမျက်စိကို ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘယ်ဟာ ကောင်းသလဲ၊ ဘယ်ဟာဆိုးသလဲဆိုတာ ချက်ချင်းသိကြမှာပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမှာပါ။ ပုဂံခေတ်က အရည်းကြီးသာသနာကနေ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားသလိုမျိုးပေါ့။
ဒါကြောင့် တချို့လူတွေ ၀ါဒဖြန့်နေတဲ့ “မြန်မာတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး” ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လုံးဝ မမှန်ကန်ပါဘူး။"